Isipaji | Klever Finance
Yonke into oyifunayo kwi-crypto wallet
Iimali ezinkulu ze-crypto zehlabathi njenge-BTC, i-ETH, i-TRX, i-XRP kunye ne-LTC, zilawulwa ngokukhuselekileyo kwi-Klever Wallet yakho.
Nguwe kuphela onokufikelela kwidatha yeakhawunti yakho. Izitshixo zakho, ii-cryptos zakho. Akukho KYC ifunekayo.
Iphelele kwaye kulula ukuyisebenzisa
Thumela, wamkele, tshintshisa, fikelela kwi-dapps kunye ne-staking ngqo kwi-app.
Dinga uncedo? UKlever uneyona nkonzo yabathengi ibalaseleyo kwihlabathi liphela le-crypto.
Bamba, Thumela kwaye ufumane i-Crypto ngokuKhuselekileyo
I-wallet epheleleyo nekulula ukuyisebenzisa ukugcina nokulawula ii-cryptocurrencies zakho ozithandayo.
Shintsha i-Crypto yakho ngoko nangoko
Ngqo urhwebe ngemali ngaphakathi app! Asifuni ubhaliso, i-KYC, okanye ii-selfies. Fumana imivuzo yokutshintshana kwabahlobo bakho.
Tyala imali ngoku kwi-cryptocurrencies ngokusebenzisa ikhadi letyala ukuze uthenge ngokuthe ngqo kwi-app.
Unokuqala utyalo-mali lwakho lwe-crypto ukusuka kwi-50 yeedola.
Sebenzisa iiDapps zakho ozithandayo
Ngale bhrawuza, uya kuba nokufikelela kuzo zonke iiprojekthi zakho ozithandayo ze-blockchain. Ukuhambelana neBinance Smart Chain, iEthereum, iTron kunye neKusama blockchains kunye nokunye.
Staking for POS Blockchains
Fumana imali ngokubeka i-cryptos yakho ngokwendalo kwi-blockchain. Ngoku iyafumaneka kwiKusama, iReef, iPolygon kunye neTron.
I-Wallet staking ekhoyo ye-Tron, i-KLV, i-KFI kunye ne-DVK.
Khuphela iKlever Wallet
Fumana ukuba kutheni iKlever Wallet lolona khetho lwakho lulungileyo?